विश्वकप छनाेटकाे तयारीसँगै सुरु भएको अन्याेल (भिडियाे रिपोर्ट) | | Neplays.com
विश्वकप छनाेटकाे तयारीसँगै सुरु भएको अन्याेल (भिडियाे रिपोर्ट)
By Neplays	 Last updated Aug 11, 2019
नेपाली फुटबलको इतिहासमा पहिलो पटक फिफा विश्वकपको सोझै दोस्रो चरणमा स्थान बनाएको नेपाली फुटबल टिम खेल्ने विपक्षीहरु र खेल तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । सेप्टेम्बर ५ मा कुवेत विरुद्धको खेलबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्दैछ । विश्वकप छनोट प्रतियोगिताको पहिलो खेल तीनवटा खेल अवे खेल्ने भएको छ । पहिलो म्याच कुवेतमा खेलाउनका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघले गरेको प्रस्ताव कुवेत फुटबल संघले स्वीकार गरेपछि नेपालले पहिलो खेल कुवेतमा खेल्ने भएको हो ।
यसकाे अर्थ नेपालले चार वटा खेलहरु घरेलु मैदानमा खेल्ने भएकाे छ । तर त्याे बेलासम्म दशरथ र‌गशाला तयार हाेला त ? यदि साे बेलासम्म मैदान तयार भएन भने विकल्प के ?
नेपालगञ्ज रंगशाला विकल्प
यता नेपालको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय स्तरको भनिएको दशरथ रंगशाला सो बेलासम्म तयार नहुने जस्तै देखिएको छ । त्यसैलेपनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपालगञ्जलाई विकल्प हुनसक्ने बताएको छ । तर नेपालगञ्जको रंगशाला मैदान ठिक भएपनि खेलाडीको चेञ्जिङ रुम लगाएका अरु केहि पुर्वाधार थप्नुपर्ने हुन्छ । यता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सो रंगशालाको टेन्डर प्रक्रिया अगाडी बढाइसकेकाले थप खर्च ब्यवस्थापन गर्न चुनौती नै छ ।
रंगशालाको मैदानको मर्मत
यस्तैमा दशरथ रंगशालामा पनि मैदान बनाउने काम पनि चुनौतीपुर्ण रहेको छ । पछिल्लो पटक परिषदले एन्फालाई मैदान बनाउनका लागि स्विकृती दिने देखिएको छ । तर सेन्थटिक ट्रयाक बनाएको चीनीया कम्पनीले आफुले बनाएको पुर्वाधार विग्रिएमा असह्य हुने भन्दै त्यसको विकल्पका रुपमा पुल हालेर मैदान बनाउने काम गर्ने की भन्ने एन्फाको तयारी छ । त्यसका लागि ढेड दुई लाख रुपैयाँ एन्फाले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि पुल हालेर मैदानको काम गर्ने हो भने प्याराफिटदेखि ट्रयाक नछुई सोझै मैदानमा पुग्ने पुल हाल्नुपर्ने हुन्छ । तर कसरी त्यो हाल्ने भन्ने अर्को प्रश्न छ ।
अब चीनीया कम्पनीले रंगशाला हस्तान्तरण गर्न ढिलाई गरिरहँदा अन्तिम विकल्पका रुपमा मैदान बनाउन एन्फालाई परिषद्ले नै यो उपाय दिएको हो । यदि यसरी काम अगाडी बढाएमा अबको केहि दिनमा नै यसका काम सुरु हुनेछ ।
नेपालको अभ्यास खेल
नेपालले कुवेत विरुद्धको खेल अगाडी एउटा मैत्रीपुर्ण खेल खेल्ने योजना बनाएको छ । जसका लागि विभिन्न विकल्पहरु हेरिरहेको छ । यस्तैमा मािल्दभ्समा खेल्नेकी भन्ने कुरा पनि नआएको होइन, तर बजेटका हिसावले माल्दिभ्स निकै महंगो हुन जाने भएकाले कुवेतको बातावरणसँग सुहाउँदो र खेलाडीलाई कुवेत विरुद्ध खेल्दा त्यहाँको बाताबरणसँग घुलमिल हुन सजिलो होस भन्ने किसिमले मैत्रीपुर्ण खेलको योजनामा एन्फाले लागेको छ । त्यसका लागि कुवेत वरपरका देशसँग प्रस्ताव गरिरहेको छ । यस्तैमा फेरी मलेसियामा खेलाउने की भन्ने कुरा पनि चलिरहेकाे छ ।
विश्वकप छनोटको समुह बी मा रहेको नेपालले कुवेत, चाइनीज ताइपेइ, अष्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । बलियो टिम विरुद्ध खेल्दा नेपालले कसरी आफुलाई तयार पार्छ त्यो भने सोचनिय विषय छ ।